>တောင်ပိုင်းဆူဒန်နိုင်ငံတော်သစ် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	>တောင်ပိုင်းဆူဒန်နိုင်ငံတော်သစ်	January 17, 2011
ဆူဒန်တောင်ပိုင်းလွတ်လပ်ရေးအတွက်တစ်ပတ်ကြာလူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးသည့်နောက်ပိုင်းမဲခွဲခြားရေတွက်ပြီးစီးသလောက်အရ(၉၅)ရာခိုင်း နှုန်းလောက်ကမြောက်ပိုင်းကနေခွဲထွက်ပြီးသီးခြားနိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်ရန်ရလဒ်တွေပြနေပြီလို.ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိတွေကပြောပါသည်၊ဥရော ပရောက်ဆူဒန်လူမျိုးတွေကျတော့၊(၉၇)ရာခိုင်းနှုန်းလောက်ခွဲထွက်ဆန္ဒမဲရလဒ်ဖော်ပြနေတယ်လို.လည်းပြောပါသည်၊နောက်ဆုံးမဲရလဒ်ကိုဖေဖော် ဝါရီလ(၁၄)ရက်မတိုင်ခင်ကိုတော့ကြေညာမှာမဟုတ်ဘူးလို.သိရှိရပါသည်၊အမေရိကန်အစိုးရကြားဝင်သက်သေလုပ်ပေးထားသည့်(၂၀၀၅)ခုနှစ်ငြိမ်ချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်အရဂျူလိုင်လ(၉)ရက်နေ.အထိသက်တမ်းဆက်လက်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်လပ်ရေးကိုဂျူလိုင်လ(၉)ရက် နေ.ရောက်မှကြေညာဖွယ်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်၊
အမေရိကန်သမ္မတအိုဗာမားကတော့၊ဆူဒန်တောင်ပိုင်းလွတ်လပ်ရေးအတွက်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးပြီးငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ် ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာမှာအားလုံးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းရှိကြဖို.တိုက်တွန်းထားပါသည်၊ဤရွေးကောက်ပွဲနဲ.ပတ်သက်ပြီးတော့အိုဗာမား က ”စိတ်တက်ကြွစရာ”လို.သုံးနှုန်းချီးမွမ်းထားပါသည်၊သို.သော်၊လန်ဒန်ရောက်မြောက်ပိုင်းဆူဒန်လူမျိုးတစ်ချို.ကတော့၊စကားလုံးလှလှတွေနဲ.တိုင်းပြည်နှစ်ခြမ်းကွဲသွားတာကိုဝမ်းနည်းကြေးကွဲစရာလို. သုံးနှုန်းပြောဆိုနေကြပါသည်၊
အမေ၇ိကန်ရောက်ဆူဒန်လူမျိုးတွေအတွက်တော့၊မဲရုံကို(၈)မြို.မှာဘဲဖွင့်ပေးထားပြီးမိမိနဲ.နီစပ်ရာမဲရုံကိုသွားဖို.တစ်ချို.ကကားနဲ.(၁၀)နာရီကြာမောင် နေရပြီးတစ်ချို.ကတော့လေယာဉ်နဲ.လာကြပါတယ်၊ဖလိုရီးဒါးပြည်၊နက်စဗီလ်းမြို.မှာဖွင့်လှစ်ထားသည့်မဲရုံကိုသွားရာမှာဆူဒန်လူမျိုးတွေအတွက်ဥပ မာပေးပြောပြရာမှာ “မဲရုံကခင်ဗျားအိမ်အနားမှာမရှိဘူး၊ဆယ်နာရီလောက်ကားမောင်း၇တယ်၊ဟိုတယ်ငှားခပိုက်ဆံမရှိဘူး၊ဆယ်နာရီလောက်အသွား နဲ.အပြန်ကားမောင်ရတယ်ဆိုတော့၊ခင်ဗျားတစ်သက်လုံးတောင်မကဘဲ၊တစ်မိသားစု၊တစ်မျိုးရိုးသက်တမ်းတောင်မှတစ်ခါမှလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတ တဲ့မဲပေးမှုစနစ်ကိုမဲထည့်ခွင့်တစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးဆိုပါတော့၊ဒါကပထမဦးဆုံးမဲထည့်ပိုင်ခွင့်ဆိုပါတော့၊”ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်မလဲလို.မေးခွန်းထုတ်မေးရာ မှာ Peter Apai Mabior ဆိုသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်က၊” နက်စဗီလ်(Nashville)ကိုကျမလမ်းလျှောက်ရရင်လည်းလျှောက်မှာဘဲလို.ပြောသွားပါသည်၊မဲရုံကိုလာပြီးမဲလာထည့်သွားသည့်ဆူဒန်လူမျိုးများကမဲ ထည့်သည့်အချိန်မှာနှိပ်စက်ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့မိမိတို.သားသမီး၊အပေါင်းအသင်း၊ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကိုသတိရပြီးသူတို.အတွက် ရည်စူးလျက်ဝိဥာဏ်အပြည့်နဲ.မဲထည့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်၊ဆူဒန်လူ.အဖွဲ.အစည်းခေါင်းဆောင်တစ်ချို.ကတော့၊အသက်(၁၂)နှစ်ကတည်းကကလေး စစ်သားဘဝနဲ.သူတို.တောင်ပိုင်းကိုကာကွယ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပြီးဒီကနေ.ဆိုရင်၊မဲစည်းရုံးသူများဖြစ်နေကြပါပြီ၊ဆူဒန်လူမျိုးများမဲရုံကိုလာရောက်မဲ ထည့်နိုင်ရေးအတွက်မှန်လုံကား၊ကာရာဗန်းကိုငှားပေးပြီးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ တောင်ပိုင်းဆူဒန်နိုင်ငံတော်သစ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစိန်ခေါ်စရာအဓိကပြဿနာကတော့၊အဗြဲဒေသ(Abyei) ထွက်ရေနံနဲ.သဘာဝအရင်းအမြစ် နဲ.ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်အငြင်းပွားစရာတွေရှိနေဦးမည်လို.သုံးသပ်နေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။